विवाहित पुरुषहरु पनि गर्लफेण्डको लागि मरिहत्ते गर्ने कारण यस्तो ? भिडियो - Enepalese.com
विवाहित पुरुषहरु पनि गर्लफेण्डको लागि मरिहत्ते गर्ने कारण यस्तो ? भिडियो
इनेप्लिज २०७४ असार ३१ गते १८:५० मा प्रकाशित
असार ३१, सबिता सापकोटा को लेख : ब्वाइफ्रेन्ड बनाउने रहर शीर्षकमा लेख छापिएको दिन एकजना अपरिचित पुरुषले फेसबुकमा म्यासेस गरे ।उनीसँग साथी भएको १ महिना जति भएको थियो । त्यो बीचमा बोलचाल भने भएको थिएन । १० जना म्युचल फ्रेण्ड भएकाले रिक्वेस्ट एसेप्ट गरेकी थिएँ ।
सायद त्यो लेख पढेर नै म्यासेस गरेको हुनुपर्छ । फेसबुकमा साथी भए पनि चिनजान नभएकाले म उनलाई अन्जान शब्दले सम्बोधन गर्छु । यति राम्री श्रिमती छोडेर गलफ्रेन्ड किन नि ? सीधा प्रश्न गरेकी थिएँ । श्रीमती छ तर त्यति कुरा मिल्दैन । रमाइलो नै हुँदैन -कहाँ छ हाम्रो समाज ? शेयर र कमेन्ट गर्दै जानु होला !